Mudaharaad balaaran oo magaalada Boosaaso ka socda. – Bosaso Times News
Mudaharaad balaaran oo magaalada Boosaaso ka socda.
admin November 1, 2017 Mudaharaad balaaran oo magaalada Boosaaso ka socda.2017-11-01T08:11:39+00:00 Jubbaland, Puntland, somali News No Comment
Waxaa saacadihii ugu danbeeyey magalaada Boosaaso ka soconaya mudaharaad ay dadku samaynayaan kaas oo looga soo horjeedo xirnaanshaha dekedda Boosaaso iyo kororka maciishada ka dhalatay arinkaas.
Shacabka oo ay ugu horeeyaan dadka dekedda ka xamaasha iyo guud ahaan shaqaalaha ku xiran hawl maalmeedka dekedda Boosaaso ayaa muddo asbuuc ku dhow aan qadayn oo baahi iyo shaqo la’aan la soo diristay.
Waxaa maalmihii ugu danbeeyey socday shirar ay lahaayeen ganacsatada Puntland ee magaalada Boosaaso kuwaas oo looga arin sanayey talaabooyinka la qaadi karo iyo sidii arinka dekedda xirnaanshaheeda oo loo aaneynayo shirkadda cusub ee dekedda la wareegtay oo soo rogtay lacago xad dhaaf ah ganacsataduna ay diidan yihiin inay bixiyaan iyaga oo sheegaya inaysan weligood bixin karin qiimaha iyo kharashyada cusub ee lagu soo rogay.
Dadweynaha magaalada Boosaaso ayaa ka welwelsan arimaha magaalada ugu muhiimsan Puntland ee ganacsiga ka soconaya.
Dawladda Puntland ayaa u muuqata mid ku wareersan arimaha socda, aadna moodo in dawladdu aysan warba ka hayn kharashyaadka dheeriga ah ee shirkadda DP World ay la timi.
Wararku waxay sheegayaan in dawladda dhexdeeda aysan ka warhayn hishiishka la galay iyo waxa uu qeexayo sidaa awgeedna ayba ku noqotay arin aysan filayn. Arimaha muuqda ayaa ah kuwa muujinaya sida dawladda Puntland ay u tahay looxjiid aan danba ka lahayn heshiishyada noocaan oo kale ah iyo saamaynta ay ku yeelan karaan shacabka iyo amniga deenada Puntland.
http://www.bosasotimes.com/mudaharaad-balaaran-oo-magaalada-boosaaso-ka-socda/http://www.bosasotimes.com/wp-content/uploads/2017/11/Photo0007-768x1024.jpghttp://www.bosasotimes.com/wp-content/uploads/2017/11/Photo0007-150x150.jpg 2017-11-01T08:11:39+00:00 adminJubbalandPuntlandsomali NewsBosaso mudaharaad,dekedda bosaso,PuntlandWaxaa saacadihii ugu danbeeyey magalaada Boosaaso ka soconaya mudaharaad ay dadku samaynayaan kaas oo looga soo horjeedo xirnaanshaha dekedda Boosaaso iyo kororka maciishada ka dhalatay arinkaas. Shacabka oo ay ugu horeeyaan dadka dekedda ka xamaasha iyo guud ahaan shaqaalaha ku xiran hawl maalmeedka dekedda Boosaaso ayaa muddo asbuuc ku dhow...admin siyaadyusuf@hotmail.comAdministratorBosaso Times News
Bosaso mudaharaad, dekedda bosaso, Puntland
« Muran weli ka taagan Dekedda Boosaaso iyo lacago la sheegay in lagu soo rogay
Dekedda Boosaaso oo dib loo furay si ku meel gaar ah »